DEG DEG:- Ciidamo badan oo lagu daadiyay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidamo badan oo lagu daadiyay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho
Waxaa wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho lagu daadiyay ciidamo badan oo isugu jira nabad-sugidda qaranka iyo kuwa booliska ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo sida la sheegay sugaya ammaanka caasimadda dalka.
Ciidamadaasi ayaa la geeyay wadooyinka Wadnaha, Sodonka, Isgoyska Zoobe iyo Makka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale hakad ku yimid isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee halkaasi ka jiray.
Warar hoose oo ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaysa in arrintaasi ay ka dambeysay kadib markii la sheegay in magaalada Muqdisho ay kusoo wajahan yihiin wufuud caalami ah ka socdo dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD, si ay uga qeyb galaan shirka dhawaan Muqdisho ka furmi doono.
Dhinaca kale, ilaa iyo haatan lama oga inta maalmood ay ciidankaasi sii joogi doonaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, waxaana xilliyadda soo socdo la filayaa in wufuuda caalamiga ah ee madaxda urur goboleedka IGAD soo gaaraan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wixii warkaan kusoo kordha dib kala soco Insha Allah